u-Elgar no-Markram bacacisa ngomdlalo wama-Proteas onama-runs amaningi
u-Dean Elgar no-Aiden Markram badlale ngokuzimisela ngokuvula umdlalo wama-Proteas nge-partnership yama-runs adlulile ku-200 ukubeka ama-Standard Bank Proteas ngaphambili osukwini lokuqala lomdlalo wesibili we-Sunfoil Test bedlala ne-Bangladesh e-Mangaung Oval ngoLwesihlanu.
Ekugcineni bahlanganise ama-runs angu-249 ebiphezulu kwesishagalombili kuwona wonke kwi-South Africa futhi kube okokuqala bobabili abashayayo bethola amakhulu kusukela ku-Graeme Smith no-Neil McKenzie behlanganisa ama-runs angu-204 e-Lord’s ngo-2008.
u-Elgar, ononyaka omuhle wekhilikithi yama-Test udlulile kuma-runs angu-1 000 kuma-Test kulonyaka okubalwa khona amakhulu amahlanu kanye nayishumi kukho konke, waba umdlali wesishagalolunye wama-Proteas ofike lapha ngamakhulu ama-Test.
Ngalena, u-Markram ulungise ahluleka kukho, ngokuthola ikhulu lakhe lokuqala kuma-Test.
Okube kuhle kakhulu, kube i-run rate etholwe ama-Proteas kulona lonke usuku. I-partnership yabo idlule kancane kuma-overs angu-53 ngaphambi kokuthi u-Elgar aphume (113 off 152 balls, 17 fours). U-Markram, uqede eno-143 (186 balls, 22 fours) njengoba bobabili abadlali bebenama-strike rate adlulile ku-70.
Ama-Proteas ahlanganise u-126 kwi-session yokuqala, u-130 kwelandelayo kanye no-172 kwi-session yokugcina enwetshiwe. Ama-Proteas aqede usuku eku-428/3 emuva kokuthi bashayiswe kuqala no-Hashim Amla (89 off 99 balls, 12 fours) no-Faf du Plessis (62 off 92 balls, 6 fours) bene-partnership yama-runs angu-140 engaphuliwe.
Kube usuku lapho abaphosa ngokuhlasela kwi-Bangladesh abashintshile bethathe ama-session amabili okuqala ukuthola uhlelo kanye nokulisebenzisa kahle. Bagcine beletha izinkinga ngokuphosa amabhola amafushane kanye nokuhlela kahle inkundla kodwa kusebenze kancane, kwaze kwathi u-Amla no-Du Plessis bakhuphula izinga.
u-Du Plessis usendaweni lapha angaholela noma ikuphi, mhlawumbe kuze kufike ku-600 futhi aphinde anike abaphosayo ithuba lokuhlasela i-Bangladesh kunama-overs amaningi ngosuku lwesibili.
Ngaphandle kwama-runs, ama-Proteas azojatshuliswa i-pitch ene-pace kanye ne-bounce kunalena yase-Potchefstroom kanye nokuthi abaphosayo kwi-Bangladesh bangasebenzisa ibhola elifushane kahle kusho ukuthi ama-Proteas azokwazi ukwenza okufanayo.
Ama-Proteas ashaye ama-boundaries angu-58 ukunezezela kwi-Sunfoil Education Trust (SET) fund, ukugqamisa imfundo yabahluphekile. Kunezezele ngo-R65 500, okubeke imali ku-R290 000 kule-series okwamanje.
Sifuna omunye umdlalo ophezulu – u-Du Plessis u-Paterson ubizelwe iqembu lama-Proteas le-ODI u-Paterson ungenela u-Morkel olimele u-Rabada uhola ama-Proteas ekunqobeni ngama-runs angu-333 Kudingeka sibambisane ukuze sinqobe - u-Bavuma Ama-Proteas adlule ekubuyiselweni emuva kabili ukuphushela ukunqoba -Bangladesh yenza ama-Proteas akusebenzele ukuba ngaphambili kwi-innings yokuqala u-Amla no-Elgar baqinisa isibambo sama-Proteas kwi-Test yokuqala Nganelisekile ngo-97 - u-Markram u-Markram uqale kahle njengoba ama-Proteas efaka ama-runs Ama-Proteas abhekana nomsebenzi wokuqala ngaphambi kwe-season ematasa ekhaya